App nyowani: Inopfupisa. Nzira iri nyore yekupfupisa ma URL | Kubva kuLinux
Mumakore ese aya ndakaita akawanda magwaro. Zvinyorwa zvakanditendera kuti ndiise akawanda emapakeji, anotungamirwa ekumisikidza zvinyorwa, kuita otomatiki backup maitiro, terminal maapplication akasiyana siyana, nezvimwe ... asi, kusvika parizvino, ini handina kumbobvira ndafunga nezve sarudzo yekuita kuti application ive yakanyanya kukomba, kusvika zvino 🙂
Ndinokuzivisa iwe: Kupfupisa
- "Zita: Kupfupisa (v .RC1)
- "Chinangwa: Pfupisa iyo URL iyo yatichangoteedzera, ndokuti, ishandure kuita chimwe chinhu chipfupi senge: http://is.gd/hyd69
- "Tafura: Inoshanda pane ese KDE, Xfce, Gnome, Kubatana uye Cinnamon.
- »Nzira yekushandisa: Kamwe iyo yakareba URL yakateedzerwa, isu tinocheka nekumhanyisa iyo application inopfupisa.
° Chimiro chekuurayiwa Nha: Kumhanya [Alt] + [F2], isu takanyora inopfupisa uye tinotsimbirira [Pinda].
° Chimiro chekuurayiwa Nha: Tinotsvaga iyo application kuburikidza neyekushandisa menyu (ona skrini pazasi)
° Chimiro chekuurayiwa Nha: Tinogona zvakare kuzviita nekutaipa mune imwe terminal inopfupisa.
- » Ini ndatozviuraya, zvino chii?: Tichaona chiziviso chinotitaurira iyo URL nyowani. Nekudzvanya [Ctrl] + [V] kana kurudyi tinya + kunama, inonamira paunoda iyo yakatokonorwa url.
3 Ungachiisa sei?
Pfungwa haina kuomarara ... sekutsanangura kwandangoita, iwe unofanirwa kuteedzera iyo refu URL, iyo yaunoda kucheka, mhanyisa iyo application (kupfupisa) nenzira yaunoda, uye izvi (kupfupisa) zvinodzosera iyo URL yatove kucheka.
Nekudaro, iko kunyorera kwakarongedzwa kutanga kutarisa kana komputa ine internet kuwana, mushure mekutarisa izvi inoedza kucheka iyo URL.
Zvakare, kana iwe ukasateedzera URL inoshanda (ngatiti iwe wakateedzera mavara pane URL) iko kunyorera kuchakuzivisa iwe 😉
Pano tinoona iko kunyorera mumenu yekushandisa (Aya ndiwo maratidziro ainoita mu KDE, asi ichave ichiripo muGnome, Kubatana, nezvimwe.):
Heano mamwe ma ziviso aunogona kudzokera kwatiri:
Kana vachishandisa Debian, Ubuntu o derivatives, unogona kurodha pasuru yacho .DEB kubva pano:
Kamwe kurodha pasi, tinya kaviri pairi uye ichaisa.
Kana vakashandisa imwe distro, ndiudze kuti ndeipi ... zvakanaka ini ndaigona kuyedza kurongedza RPMfuti son_link pamwe unogona kurongedza ArchLinux, asi ndamunetsa zvakakwana hehehe.
NOTA: Izvo zvakanaka kujekesa, kuti ini handisi programmer hehe, asi ini ndinogona kukuvimbisa kuti chishandiso ichi haizokuvadze system yako zvachose.
Zvakanaka, handifunge kuti kune zvimwe zvakawanda zvekuwedzera.
Parizvino iko kunyorera hakuna kuoma zvachose, uye kuwanda kwakawanda kunogona kuitwa 🙂
Ndingafarire zvisingaite maonero ako, makomendi, mazano, mazano uye / kana kutsoropodza, ndinovimbisa kuyedza kufadza munhu wese wandinogona, nekuti ndinodzokorora, handizvione semunhu anogadzira 😀
Kwazisai uye nekutenda nekuverenga izvi zvese.
PD: Ndiri kutofunga kuzviita diki uye VERY yakapusa GUI, iyo inobvumidza iwe kutarisa nhoroondo yeakagurwa ma URL, pamwe neka diki ndima yekuisa iyo URL yaunoda kutema.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » App nyowani: Inopfupisa. Nzira iri nyore yekupfupisa ma URL
Uye iyo kodhi yekodhi ichave iripo? Pd: Iko kunyorera kunonakidza. makorokoto
Ehe hongu, iko kunyorera kuri pasi peGPL rezinesi. Muchokwadi, iyo sosi kodhi haina chimwe chinhu kunze kwechinyorwa chimwe chete icho chinoitwa (/ usr / bin / kupfupisa), unogona kuzvitarisa kana uchida.
Kutenda nechinhu chinonakidza 🙂
Ino inguva yekutanga kuti ini ndirongere chimwe chinhu kune vamwe vanhu, ndokuti, kwete kwandiri chete ... - ^
to.ly, mudiki.com, mudiki.cc ...
Ndakaedza goo.gl ... asi handina kukwanisa kuwana zvandaida, handina kuzomboedza zvakare nekuti ne is.gd zvakatondishandira chiuru zvishamiso.
Chero chinhu chinopesana nekushandisa is.gd? ... O_O
Mazhinji mapfupiso eurl akabuda, mamwe ari nani kupfuura mamwe, asi kana iwe uchida zvese izvi masevhisi, hapana chinhu chiri nani pane kuve neyako script yakaiswa, kazhinji mahara senge ako
YAKO yakanaka kwazvo, ini ndakatotenga dura diki ndikarigadzirisa neYAKO, asi sezvo ini handina kumboiona ichishanda, yakaramba irimo ichiunganidza guruva. xD
Hameno kuti chii ichi hehe, asi vakatondiita kuti ndide kuziva 😀
Ini ndatoiyedza, inoshanda mushe ^ ^ Kumirira iyo GUI 🙂
Ndinovimba iyo GUI haitore nguva yakareba, kutanga ini ndichazviitira KDE (Qt), ndobva ndazama neXfce uye / kana Gnome3, ndobva ndaedza muCinnamon uye Kubatana ... uff ... kushanda nesimba hahaha.
Ndiri kuona kuti hauna kuisa LXDE, pamwe iyo LXDE yandinayo pano ndiyo yakapa matambudziko pakuiyedza kuseri kwemutumwa
iyo sosi kodhi yekuchinjisa kune zvandinoda XD
Iyo kodhi iripo zvakajeka mu / usr / bin / kupfupisa 😀
Inoshanda zvakakwana! .Ndatenda!
Pindura kune gussound
Kwete kunetsa, asi hazvisi nyore nebhukumaki?
Kwete murume, hongu haunetseki 🙂
Pfungwa yaive yekuita application iri nyore, inogona kugara ichivandudzwa, isa zvimwe sarudzo, mabasa, nezvimwe. Ini handisi programmer chaiye, ini chete ndine ruzivo rweBash ... saka zviri pachena kuti ndakasarudza uyu mutauro.
Zvino sei usingamaki?
1. Haisi izvo zvandaida, nekuti ini handidi kutsamira pasoftware yekunze (browser)
2. Chaisazogadzirwa neni, saka ndaisakwanisa kuchinzwisisa zvakanyanya sekuda kwangu.
3. Hazvaibvumidza ini sezvakawanda sezvandinoda kuita ... nhoroondo, GUI, sarudzo, nezvimwe.
Pfungwa yako haisi shamwari yakaipa, chaizvo kwete, kungoti zvaive zvisiri izvo zvandaida .. - ..
Simon Orono akadaro
Zvichava dambudziko rakawandisa kuripakira kune zvese zvinogoverwa? A .tar.gz pamwe?
Pindura kuna Simon Oroño
Kuti ndiite izvi, ndinofanira kupedzisa kugadzira script yekumisikidza, iyo inoona iyo distro, inoisa zvinoenderana nekuzvimirira uye zvakare inoisa ipfupi.
Ini ndinokumbira, kana zvichibvira, iyo RPM yeOpenSuse (kana yechero RPM distro; P)
Edza iyi RPM: http://www.mediafire.com/?iuni6rhx93uco58
Izvi zvakafanana .DEB, asi yakashandurwa neMutorwa neAurosx.
Chero kukanganisa, ndiudze 😀
Aya maapplication anotaridzika kunge akanaka, atove anonyanya kubatsira mahure marefu kwazvo, ah · _ · usashandise mutorwa kuenzanisa debs ne rpm, kekupedzisira pandakaita izvozvo neapps dzemunhu kuchipfuudza mudhidhi, ini shit system yese . maapplication andakange ndashandisa akange ari postinga ndeyekuti taringa atumire kubva kune iwo maapp, asi zvakapusa handina kuona kuti yanga iine rpm package yayo, saka ndakabata dhiri ndokuripfuudza nemutorwa (yakaipa pfungwa: - /), apo kuiisa hiva pachinzvimbo, nyaya yacho yanga ichiita. Desktop rese rakakandwa (panguva iyoyo ndakashandisa gnome shit xD) uye mushure mekunge ndaridzorera patsva uye kunze kwenzvimbo haina kutanga futi, zvese zveesimble apps zvinoenderana neJava uye kuti ini ndanga ndatova neJava yakaiswa zvakare: - / saka izvo neruzivo handikurudzire kushandisa mutorwa xD
Haisi yekukanganisa chikumbiro chako (: P), asi ndezvipi zvipfupi zvekubatanidza zvinoshandiswa izvozvi? Ko anga asiri Twitter anga atovauraya neiyo t.co?
Ini ndichaiyedza pane yangu Fedora neumwe wangu!
Iwe unofanirwa kuisa xclip pamberi (kugadzirisa iyo rpm kuti iibvunze sekuvimbika kungave kwakanaka). Zvikasadaro iko kunyorera hakukodzere iwe. (Semuenzaniso chinongedzo chandakaita (yangu webhusaiti) http://is.gd/uXDaqA )
SolusOS 2 inogona kudzika Debian uye kuve PiSi-yakavakirwa amai distro